लन्डन एम्स्टर्डम बाट यूरोस्टार ट्रेन € 40 बाट | एक ट्रेन सेव
घर > रेल यात्रा हल्याण्ड > लन्डन एम्स्टर्डम बाट यूरोस्टार ट्रेन € 40 बाट
युरोप मा यात्रा गर्न सबैभन्दा लोकप्रिय मार्गहरू मध्ये एक छ लन्डन देखि एम्स्टर्डम गर्न, माथि एउटा द्रुत यात्रा4लाख यात्रु प्रत्येक वर्ष ट्रेक बनाउने. यातायात को लागी एक शीर्ष विकल्प यूरोस्टार मार्फत ट्रेन द्वारा छ, उच्च गतिको रेल दुई युरोपेली क्यापिटल जडान. यो मार्ग, जो खुलेको 2018, पैसा बचत र रेल यात्रा प्रदान गर्दछ सुविधाको आनंद देख गर्नेहरूका लागि एक राम्रो विकल्प रहन्छ.
तल, तपाईंले आफ्नो लंडन एम्स्टर्डम यूरोस्टार यात्रा प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्न आवश्यक सबै विवरणहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ.
यस लेखमा रेल यात्रा बारे ग्राहकहरु शिक्षित गर्न लेखिएको थियो र सुरक्षित एक ट्रेन द्वारा सिर्जना गरिएको थियो, सस्तो ट्रेन टिकट वेबसाइट संसारमा.
Eurostar ट्रेन टाइम्स लन्डन गर्न एम्स्टर्डम देखि
को Eurostar अक्सर चल्छ, सम्म साथ 16 बिदा आधारमा प्रति दिन प्रस्थान र सप्ताहन्तमा. लन्डनबाट एम्स्टर्डमको लागि पहिलो ट्रेन कुनै पनि दिन लन्डन सेन्ट प्रस्थान गर्दछ. मा Pancras 07:16 र को कुल लिन्छ3घन्टा र 55 मिनेट, मा एम्स्टर्डम केन्द्रीय मा आइपुगेपछि 12:11 (एम्स्टर्डम Centraal एम्स्टर्डम सेन्ट्रल स्टेशन गर्न डच नाम हो). यो अक्सर उपलब्ध सस्ता टिकट को छ, त्यसैले तपाईं प्रारम्भिक बढ्दो गर्न averse तपाईंले केही पैसा बचत र किरण को ब्रेक मा बाहिर टाउको सक्दैन हुनुहुन्छ भने.
मार्ग पटक लगभग कहिल्यै घण्टा हो, जो तपाईं प्रस्थान पटक विकल्पहरू प्रशस्त पात. रात को अन्तिम रेल मा प्रस्थान 17:16 र मा आएको 22:11, जो भर्खरै पर्याप्त समय डच राजधानी मा एक लेट-रात खाजा आनन्द. जो तपाईं एउटा बटन स्क्रिनको सही पाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो साइट जाँच वा SaveATrain.com क्लिक, एम्स्टर्डम यूरोस्टार समय सारिणीको लागि पूर्ण लन्डनको लागि.
लन्डन देखि ब्रसेल्स ट्रेनको मूल्य
लन्डन देखि पेरिस ट्रेनको मूल्य
जिनेभादेखि लन्डन ट्रेनको मूल्य
लन्डन देखि एम्स्टर्डम ट्रेनको मूल्य
द Eurostar मा तपाईंको टिकट बुकिङ
सबै यूरोस्टार ट्रेन टिकट कम्तीमा दुई टुक्रा को सामेल छन् सामान र एक हात झोला. तपाईं सामान को एकदम धेरै संग यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं पनि तपाईं थप वस्तुहरू ल्याउन अनुमति दिन्छ एउटा टिकट को लागि रोज्न सक्नुहुन्छ. जबकि बजेट एयरलाइन्स आफ्नो प्रारम्भिक बुकिङ लागि कम शुल्क लगाउन सक्छ, झोला शुल्क र सीट विकल्प शुल्क चाँडै नपुगेको, भन्नाले के तपाईं सारा धेरै कम लागि थप तिर्ने अन्त.
यस लन्डनको लागि एम्स्टर्डम यूरोस्टार यात्राको लागि टिकट मूल्यहरू धेरै उतार चढाव हुन्छ, त्यसैले हामी टिकट रूपमा बित्तिकै खरीद सिफारिस गर्छौँ हुनुहुन्छ सक्षम. सामान्यतया बोल्ने, यी टिकट अग्रिम बिक्री तीन महिना मा जाने, अवसरमा हुनत तपाईंले तिनीहरूलाई यात्रा को आफ्नो मिति अघि छ महिना सम्म पाउन सक्नुहुन्छ. हामी हाम्रो प्रयोग गर्न सिफारिस एक ट्रेन सेव विश्व रेल टिकट वेबसाइट फेला पार्न र आफ्नो रेल टिकट बुक गर्न, जो स्वतः तपाईंलाई मूल्य सम्भव मूल्य प्राप्त गर्न सबै उपलब्ध सूची खोजी, प्रत्याभूति.
एम्स्टर्डमदेखि लन्डन ट्रेनको मूल्य
रोटरडम लन्डन ट्रेन मूल्यहरु
पेरिसदेखि लन्डन ट्रेनको मूल्य
ब्रसेल्सदेखि लन्डन ट्रेनको मूल्य
मूल्य निर्धारण र टिकटको प्रकार लन्डनमा एम्स्टर्डममा यूरोस्टार ट्रेन द्वारा
को Eurostar रेल आफ्नो बजेट आधारमा तीन-वर्ग केबिन संचालित. ती लागि बस एक ठाउँमा अर्को प्राप्त गर्न देख, दोस्रो वर्ग टिकट आफ्नो सर्वश्रेष्ठ विकल्प हो. व्यापार यात्रा ती सट्टा मानक प्रिमियर वा व्यवसाय प्रिमियर टिकट रुचि हुन सक्छ, दुवै जो तपाईं पहिलो-वर्ग कोच मा बस्न र आफ्नो यात्रामा खानाको प्रदान गर्न अनुमति.
हामी अघि उल्लेख गर्नुभएको रूपमा, मूल्य निर्धारण आफ्नो यात्रा तिथिहरु अनुसार भिन्न, त्यसोभए तपाईले आफ्नो रेल टिकट बुक गर्न चाहानुहुन्छ एकचोटि उपलब्धता खुल्ने बित्तिकै. यदि तपाईं अग्रिम मा पर्याप्त बुक, तपाईं भुक्तानी गर्न बारेमा देख गरिने 92 दुईतर्फी डलर, वा बारेमा 46 एक-तरिका डलर. पछिल्लो मिनेट सम्म प्रतिक्षा मूल्यहरु आकाश-उच्च ड्राइव गर्न सक्छन्, लागत लगभग दुगनी संग पछि तपाईं आफ्नो टिकट किन्न.
मनमा राख्न भनेर मई हुए देखि, लन्डन सेन्ट गर्न एम्स्टर्डम सेन्ट्रल स्टेशन बाट प्रत्यक्ष रेल. Pancras सञ्चालन सुरु हुनेछ, जो तपाईं आफ्नो फिर्ती यात्रामा यात्रा समय धेरै घन्टा बचत हुनेछ. पनि सुरु रोट्टरड्याम गर्न प्रत्यक्ष सेवा हो. यी सेवाहरू पनि वर्तमान मूल्य निर्धारण भन्दा सस्ता हुनेछ.
को Eurostar उपलब्ध एक रेल पास पकड गर्नेहरूलाई छ कि टिप्पण यसलाई गरेको लायक, त्यसैले तपाईंले यो यात्रा एक मोहक र किफायती बनाउन चाहनुहुन्छ भने, अग्रिम आफ्नो रेल टिकट किन्न. तपाईं विभिन्न वेबसाइटहरु मा अनलाइन रेल टिकट पाउन सक्नुहुन्छ, यद्यपि ती वेबसाईटहरूले यूरोस्टार ट्रेन टिकटको तुलनामा फुलेको मूल्यहरू देखाउँछन् एक ट्रेन वेबसाइट सुरक्षित.
राजधानी मा एक पटक, तपाईं विभिन्न एम्स्टर्डम रेल को एक नम्बर मार्फत हुए जडान गर्न सक्नुहुन्छ. उच्च-स्पीड रेल सेवाहरू महाद्वीपको विभिन्न स्थानहरूमा पनि प्रस्ताव गरिन्छ.
ब्रेमेनदेखि एम्स्टर्डम ट्रेनको मूल्य
ह्याम्बर्गदेखि एम्स्टर्डम ट्रेनको मूल्य
जहाज लन्डनबाट एम्स्टर्डमको लागि युरोस्टार ट्रेन
एक पटक जहाज, लन्डनबाट एम्स्टर्डमको लागि रेलको कूल यात्रा समय लगभग छ3घन्टा र 52 मिनेट. आफ्नो पूर्व-प्रस्थान आगमन संयुक्त, आफ्नो कुल यात्रा समय वरिपरि हुनेछ 4.5 घण्टा.
पहिले उल्लेख रूपमा, त्यहाँ मुक्त वाइफाइ जहाज, ताकि तपाईं आफ्नो इमेल र सामाजिक मिडिया आवश्यकता सबै साथ राख्न सक्नुहुन्छ. आफ्नो टिकट आधारमा, तपाईं पनि भोजन कोच टाउको सक्नुहुन्छ, जहाँ तपाईं खाना पाउन सक्नुहुन्छ, पेय र नाश्ता. तपाईं पहिलो-वर्ग सानो घर मा विराजमान हुनुहुन्छ भने, खाना आफ्नो सीट सीधै ल्याइनेछ.
आगमन मा, त्यहाँ राहदानी नियन्त्रण मार्फत जाने कुनै आवश्यकता छ, Brexit र ईयू देखि बेलायत हटाउन यी सेवाहरू परिवर्तन हुन सक्छ पछि हुनत. तपाईं आफ्नो यात्रा मा प्रारंभ अघि स्थानीय कानून जाँच गर्न निश्चित हुनुहोस्.
लन्डन देखि एन्ट्वर्प ट्रेनको मूल्य
लन्डन देखि लिली ट्रेनको मूल्य
स्ट्रासबर्गदेखि लन्डन ट्रेनको मूल्य
लन्डनदेखि रोटरडम ट्रेनको मूल्य
को पाठ्यक्रम, ठ्याक्कै युरोप सर्वश्रेष्ठ रेल यात्रा मार्फत अनुभव छ किन असली प्रश्न हो – जे भएपनि, यो राम्रो-जडान महादेशमा सजिलै विमान द्वारा traversable छ, कार, वा बस. तथापि, एक रेल सवारी मा जंगली दृश्यहरु रूपमा रोमान्टिक केही कुराहरू आफ्नो विन्डो बाहिर छन्, र पहिलो-समय यात्री लागि त्यहाँ लगभग बोर्ड मा एक रेल hopping यसलाई प्रस्थान बस अघि भन्दा बढी सुविधाजनक केही छ. यो युरोप गरेको विमानस्थलको गहिरो विपरीत छ, जहाँ उन्नत चेक-समय दुई घण्टा अधिक छ र तपाईं विमानस्थलमा स्थान रुपान्तरितको अतिरिक्त समय र पैसा खर्च.
यात्रा समय कुरा, युरोप यसको उच्च गतिको रेल लागि प्रसिद्ध छ, जो टाढा यसको घुमावदार सडकों outstrip. गाडिहरु महाद्वीप भर छिटो र अक्सर प्रत्यक्ष छन्, जो कम समय नियमित यात्रा र थप समय अन्वेषण अर्थ.
तिनीहरूले अक्सर शहर को केन्द्र भित्र निर्माण गरिन्छ रूपमा रेल स्टेशन पनि भइरहेको राम्ररी स्थित फाइदाको छ. तिनीहरूले सामान्यतया मार्गहरू हजारौं मा प्रति दिन धेरै प्रस्थान समय प्रदान, भन्नाले तपाईं यात्रा को लागि एक विकल्प सधैं छौँ.
फ्रान्कफर्ट लन्डन ट्रेन मूल्यहरु
म्यूनिखदेखि लन्डन ट्रेनको मूल्य
Moutiers लन्डन ट्रेन मूल्यहरु
मार्सिले लन्डन ट्रेनको मूल्यहरु
तपाईंको लन्डन एम्स्टर्डममा ट्रेन द्वारा बचाउने रेलको साथ टिकट बुक गर्नुहोस्
सबै पुस्तक टिकट हाम्रो साइट खोज युरोप गरेको सर्वश्रेष्ठ गन्तव्यहरू, लगायत बेल्जियम, इटाली, स्विट्जरल्याण्ड र बेलायत (युरोस्टारको साथ लन्डनबाट एम्स्टर्डम जाने रेल सहित). हाम्रो खोज इन्जिन डिजाइन गरिएको छ पैसा बचत सबै टिकट र कुनै बुकिंग शुल्क समावेश. हामी भुक्तानी गर्न धेरै तरिका स्वीकार गरेर तपाईँले किन्न लागि सजिलो बनाउन, सहित क्रेडिट कार्ड, GiroPay, आदर्श र धेरै.
त्यसैले, तपाईंको यात्रा को लागि जो कारण, तपाईं एक्लै वा अन्यसँग यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ कि, ट्रेन बचाउन ट्रेन टिकट खोज्न केही मिनेट लिनुहोस्, जो प्रस्ताव सबै भन्दा कम मूल्यहरु, प्रत्याभूति.
पुस्तक खोज्दै? लिन3मिनेट र एम्स्टर्डम रेल सवारी आफ्नो लन्डन लागि टिकट पाउन www.saveatrain.com . तपाईं यात्रा गर्न चाहनुहुन्छ कि मिति र समय भर्नुहोस्, र हामी सबै भन्दा राम्रो मूल्य तपाईंको यात्रा को लागि प्रदान गर्नेछ.
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ? यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Flondon-amsterdam-direct-train%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#stpancras एम्स्टर्डम केन्द्रीय यूरोपेन्ट्रावेल लन्डन longtrainjourneys रेल यात्रा ट्राभेलमस्टरडम यात्री भूमि